Global Voices teny Malagasy » Macau: Fibahanana ara-politika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Janoary 2019 13:37 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Miranah
Sokajy: Makaô (Shina), Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Nahita ireo mpiserasera aterineto avy any Macau fa namelona ny rafitra fanivanana miankina amin'ny voambolana lehibe ny sehatra fifanakalozan-kevitra lehibe indrindra ao Macau, cyberctm  ary nanaisotra ny teny hoe “Lehiben'ny mpanatanteraka” sy ny solony “Lehiben'ny Mpangalatra”
Ny antsoina hoe “Lehiben'ny Mpanatanteraka ” na CE (amin'ny teny Shinoa 特首) no filohan'ny Fari-pitantanana Manokana ao Macau ary i Edmund Ho Hau Wah no C.E amin'izao fotoana ary ny ho mpandimby azy dia Fernando Chui Sai On. Tao anatin'ny roa taona, dia voasaringotra tamin'ny tantaran-kolikoly misy ifandraisany amin'i Ao Man Long  i Edmund Ho ary rehefa mipoitra ny teny hoe “CE / 特首), dia matetika misy ifandraisany amin'ny fanehoan-kevitra miiba.” Maro koa ny mpiserasera aterineto mampiasa ny teny hoe “Lehiben'ny Mpangalatra 賊首” mba hanoloana ny hoe “CE “.
Tamin'ny 17 Oktobra, nahatsikaritra ny mpisera cyberctm 星 殺 iray fa nibahana  ny teny Sinoa hoe “C.E / 特首” koa ilay forum. Na izany aza, rehefa mampiditra tahala (espace) ao anatiny sy anelanelan'ny teny , dia miseho ilay teny.
Nahasarika ireo mpisera aterineto mba hanao fanandramana ny lahatsoratra. Nahita ny mpisera 不 動 iray fa rehefa ampiarahana amin'ny loko samihafa ireo teny roa , dia tsy handairan'ny sivana. Nahita koa ny mpisera gdeleuze fa ny sivana any Macau dia tsy mitovy amin'ny an'i Shina namany  satria tsy voasivana ny teny saro-pady toy ny “4 Jiona”, “Falungong”, “CCP”, “hetsika demokratika 89″. Na izany aza, nahatsikaritra i 愛 瞞 停 轉 日 fa voasivana ny teny “Lehiben'ny Mpangalatra -賊首 . Mazava ho azy fa afaka mamela elanelana foana ny mpampiasa na mampiditra teboka ao anatiny sy eo anelanelan'ireo teny roa ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/29/134369/
 Lehiben'ny Mpanatanteraka: http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Executive_of_Macau
 Ao Man Long: http://en.wikipedia.org/wiki/Ao_Man-long
 mampiditra tahala (espace) ao anatiny sy anelanelan'ny teny: http://forum.cyberctm.com/forum/viewthread.php?tid=426713&extra=page%3D1&page=2###
 ampiarahana amin'ny loko samihafa ireo teny roa: http://forum.cyberctm.com/forum/viewthread.php?tid=426713&extra=page%3D1&page=4###
 tsy mitovy amin'ny an'i Shina namany: http://forum.cyberctm.com/forum/viewthread.php?tid=426713&extra=page%3D1&page=5###